Nafaqada Iyo Caafimaadka Geedka Moringa
USA, 12 Nov 2012 (Alldhooftinle.com)
Moringa waa geed aad u NAFAQO iyo Caafimaad badan. Wuxuu ka baxaa dhulka Soomaliya la cimilada ah. Meel la tuuro ma laha oo wuxuu ka dawo yahay in ka badan 300 cudur Hay'ada UNICEF sanadkii 2008 Waxay Ku beertay Hargeysa agteeda.
Geedka la yiraahdo Moringa wuxuu asalkiisu ka soo jeedaa woqooyiga bari ee Hindiya Dadka degen buuralayda himilaaya ayaa qarniyaal isku daweyn jirey geedkan. wadamada reer galbeedka ayaa hadda aqoonsaday faa'iida geedkani u leeyahay nolosha bani aadmiga. Waxaa ka yaabiyey markay ogaadeen in geedkani daawo u yahay ilaa 300 oo xanuun. Waxay kale oo indhuhu soo bexeen markii ay u cadaatay inuu 18 jeer ka potassium badan yahay muuska, 20 jeerna ka protiin badan yahay ukunta iyo hilibka. Wuxuu kaloo 17 jeer ka Calsium badan yahay caanaha.
Dhakhtarka caanka ee John Hopkins ayaa isaguna baadhitaan dheer ka dib codkiisa ku biiriyey fikradii hay'ada caafimaadka aduunka FAO ee ahayd in wadan walba lagu beero geedkan. Xanuunada ilaa hada la ogaaday inuu daweeyo ama yareeyo waxaa ka mid ah; macaanka, dhiigkarka, gaastariga, kansarka, iyo xanuunada dumarka iyo caruurta.
Sanadkii 2008 waxaa deegaanka Jaleelo oo Hargeysa u jirta 30km lagu beeray tiro geedka Moringo ah kaasoo ay gacan ka geysatay Hay'ada UNICEF. waxaa kaloo geedkan lagu beeray magaalada galdogob halkaasoo uu si fiican uga baxay ilaa hadana la isticmaalo.
Geedkan ayaa caleentiisa sida qaadka loo calashadaa, waxaa kale oo loo cabaa sharaab ahaan, iyadoo weliba sida caleenta shaahana loo karsan karo. Waxaa kale oo intaa dheer adigoo saliidiisana jidhka iyo madaxaba marsan kara. Faa'iidada geedkan oo aan ahayn mid awoowe laga soo gaadhay oo keliya balse saynis ahaan Islaamka iyo Galbeedkuba isku raaceen inaanu jirin geed dhulka korkiisa ka baxa oo la faa'iido ah geedkan.
Dhakhtarka Turkiga ee Dr. Oz ayaa isaguna wax badan ku celceliyey sida geedkani u kordhiyo awooda bani aadmiga. isagoo sheegay in hadii aad isticmaasho todoba maalmood keliya aad dareemeyso isbedel weyn. Hadaba hadii aynu nahay Soomaali, ayna inagu yar yihiin dhakhaatiirta iyo goobaha caafimaadkuba miyaanay ahayn inaynu geedkan goob kasta iyo meel kasta ku beero mar hadii la ogaaday inuu si fiican ugu bixi karayo dhulkeena.